कात्तिक ३ गतेः पूर्णिमाको दिनमा पनि काल बेला र उत्पात योग परेको छ, कस्तो होला राशिफल ?| Gandaki Voice
आज मिति २०७८ कात्तिक ३ गते बुधबार, इस्वीसंवत अक्टुवर २० तारिक सन् २०२१, श्रीशाके १९४३, नेपाल संवत् ११४१, राक्षश नामको संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलाद्र्धमा छन् । वर्षा ऋतु चलिरहेको छ ।
चान्द्रमान अनुसार आश्विनशुक्ल दुर्गापक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज आश्विनशुक्ल दुर्गापक्षको पूर्णिमा तिथि रहनेछ । आज नक्षत्रमा रेवति, विष्कुम्भादि योगमा हर्षण, करणमा भद्रा र आनन्दादि योगमा उत्पात रहनेछ ।
सूर्य तुला राशिमा, चन्द्रमा मीन राशिमा रहनेछ । आज दिनमान २८ घटि २२ पला अर्थात ११ घण्टा ३१ मिनेटको रहनेछ । आज सूर्योदय काठमाडौं केन्द्र विन्दुमा रही बिहान ६ बजेर ०७ मिनेटमा तुरुदेव मुहूर्तमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ ठीक ५ः२८ बजे हुनेछ ।
मिथुनः आज समय शुभ छ । विवादित विषयहरूबाट निचोड तपाइँकै पक्षमा आउनेछ । पढ्ने लेख्ने काममा अरूलाई पछाडि छोड्दै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । पुराना समस्याबाट छुटकारा पाइने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । स्वास्थ्य आफ्नै काबुमा हुने हुनाले नयाँनयाँ काम गर्न सकिनेछ । तपाइसँग मनमुटावको भावना राख्ने तथा सत्रुता राख्न चाहनेहरू आफै कमजोर हुनेछन् ।
सिंहः आज पनि समय शुभ छैन । आफन्त तथा अग्रजहरू सँग विवाद सर्जन हुनेछ । गैर न्यायिक काम नगर्नु होला दण्ड तथा जरीवाना हुने समय रहेको छ । स्वास्थ्यमा समस्या आउने तथा औषधि उपचार खर्च बढेर जानेछ । माया प्रेममा धोका हुनेछ भने पढाई लेखाइमा मन नजाँदा अरूभन्दा पछि परिनेछ । विदेशी सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने कर्म प्राप्तिको लागि लामो दुरीको विदेश यात्रा हुनेछ ।
तुलाः आज आज समय र स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । नयाँ काम पाउने तथा व्यापारमा प्रशस्त आम्दानी हुने हुँदा आर्थिक स्थिति सुदृढ हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । अध्ययनमा राम्रो सफलता हात लाग्नेछ । पैतृक सम्पत्ति तथा सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न पाइने हुँदा मन प्रसन्न हुनेछ ।
वृश्चिकः समय शुभ छैन, स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । चिसो र पखालालाले ठूलो दुःख दिने सम्भावना छ । त्यसकारण पानी उमालेर मात्रै पिउनुहोला । पिसाब सम्बन्धी रोग एक्कासी देखापर्न सक्छ । एक पटक स्वास्थ्य जा“च गराउनु नै उचित हुनेछ । आज गरेको लगानीबाट नोक्सानी हुनसक्छ । त्यसकारण लेनदेन व्यापार सबै कार्यमा विशेष ख्याल गर्नुहोला ।
धन: आज पनि समय खराब छ । आफन्त व्यक्तिसंगै विवाद पर्ने सम्भावना छ । मानसिक चञ्चलपनले पेशागत हानी हुने सम्भावना छ । साढेसातीको प्रभावले समग्र समय कष्टप्रद, अनावश्यक भ्रमण, आत्मीयजनबाट धोका पाइनेछ । त्यसैले हरेक कार्यमा सतर्क अति आवश्यक छ । समय खराब रहेकाले आज भ्रमण, धन लगानी, महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय नगर्नुहोला ।
मकरः आज पनि समय राम्रो रहनेछ । परिवारका साथ रहेर मिष्टान्न भोजन लिने अवसर मिल्नेछ । तपाईँले सुरु गर्नुभएको कामको दाजुभाइ तथा छिमेकीबाट उच्च मूल्याङकन हुने ग्रहयोग रहेकोेछ । व्यापार व्यवसायमा भने जस्तो नाफा कमाउन सकिनेछ भने छोटो तथा रमाइलो व्यावसायिक यात्राको तय हुनेछ । आफ्नो प्रिय पात्रलाई आफ्नै वरिपरि देख्न पाउँदा मन प्रशन्न रहनेछ ।
साइतः आज सूर्य तुला र चन्द्रमा मीन राशिमा छन् । त्यसैले पश्चिम बाहेक अन्य दिशाको यात्रा शुभ छैन । आज बुधबार परेकाले उत्तर दिशाको यात्रा गर्दै नगर्नुहोला । यदि बाध्यता नै छ भने धार्मिक उपाय अपनाएर मात्र यात्रा गर्नुहोला । शुभ बेलामा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा प्रारम्भ गर्नुुहोला । साथै पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर पूर्व तथा स्त्रीको नेतृत्वमा वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिम र ईशान अर्थात उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ । यदि तपाइँ विशेष यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ दिशामा मात्रै गर्नुपर्दछ ।
बिहान ६ः०३ बजेदेखि ७ः३० बजेसम्म लाभ बेला
बिहान ७ः३० बजेदेखि ८ः५६ बजेसम्म अमृत बेला
बिहान ८ः५६ बजेदेखि १०ः२३ बजेसम्म काल बेला
बिहान १०ः२३ बजेदेखि ११ः४९ बजेसम्म शुभ बेला
बिहान ११ः४९ बजेदेखि १ः१५ बजेसम्म रोग बेला
दिनमा १ः१५ बजेदेखि २ः४२ बजेसम्म उद्धेग बेला
दिनमा २ः४२ बजेदेखि ४ः०८ बजेसम्म चर बेला
दिउँसो ४ः०८ बजेदेखि ५ः३५ बजेसम्म लाभ बेला
मंसिर १५ गतेः श्रीकृष्णको प्रिय दिनमा काल योग परेको छ, कस्तो होला राशिफल ?
मंसिर १३ गतेः एकै दिन २ पटक अमृत बेला र सबैभन्दा खराब राहुकाल बेला पनि परेको छ, कस्तो होला राशिफल ?
मंसिर १२ गतेः सूर्य देवको प्रिय दिनमा पनि काल बेला परेको छ, कस्तो होला राशिफल ?
मंसिर ११ गतेः एकै दिन दुई पटक काल बेला, बीचमा अमृत बेला पनि परेको छ, कस्तो होला राशिफल ?
मंसिर १० गतेः महालक्ष्मीको प्रिय दिनमा मृत्यु योग परेको छ, कस्तो होला आजको दिन ?